Nyika zhinji dzinosvibisa pasirese: maitiro nemhedzisiro | Green Renewables
Nyika zhinji dzinosvibisa pasi rose
ChiGerman Portillo | 17/05/2022 12:00 | Environment
Kusvibiswa kwenyika idambudziko rakakura kwazvo rinoda kugadziriswa nenzira yakakosha. Kana tichitaura nezve kusvibiswa kunogadzirwa nenyika mbiri, tinonyanya kutaura nezvekusvibiswa kwemhepo. Kunyange zvazvo kune marudzi akasiyana-siyana ekusvibisa, kusvibiswa kwemhepo kuri kukonzera migumisiro yakakomba pasi rose, sekupisa kwepasi uye kuchinja kwemamiriro ekunze. The nyika zhinji dzinosvibisa pasi rose Ndivo vanoburitsa magasi anosvibisa zvakanyanya mumhepo.
Muchinyorwa chino tichakuudza kuti ndedzipi nyika dzinosvibisa zvakanyanya uye mhedzisiro yekusvibiswa kwemhepo kune zvakatipoteredza.
1 Kushatiswa kwemhepo
2 Migumisiro mikuru
3 Nyika yakasvibiswa zvakanyanya pasi rose
4 Nyika zhinji dzakasvibiswa pasi rose
Iyi inyaya isingachasanganisirwi nezvido zvezvakatipoteredza. Yakave chikamu chehupenyu hwezuva nezuva hwemunhu wese mumakore apfuura. Kusvibiswa kwemhepo idambudziko rakapararira, uye mhinduro yacho haisi mumaoko ehurumende kana nyika dzakawanda, asi munhu wose anogona kupa tsanga yejecha kumisa izvi. Uchapupu hunonyanya kuoneka hwekusvibiswa kwemhepo makore ane mukurumbira ekusvibiswa anoungana munzvimbo dzemaguta uye anokuvadza hutano.
Kune dzimwe nzira dzekusvibiswa kwemhepo dzisingaonekwe nyore kana kuonekwa, asiwo dzine migumisiro inouraya kuhutano hwezvinhu zvipenyu uye zvisikwa. Izvi zvinosvibisa zviri kukonzera kudziya nemigumisiro ine njodzi panyika. Mukuwana kwedu zvikonzero zvekusvibiswa kwemhepo, tinoona kuti kwezviuru zvemakore ehupenyu pasi pano, mhepo ine chepfu yakagadzirwa.
Kuburitsa muchetura chikamu chekutenderera kwehupenyu, asi mukati memhando yechisikigo. Nemamwe mashoko, kusvibiswa kwemamiriro ekunze hakukanganisi zvakanyanya kuumbwa kana chimiro chezvipenyu nekuti zvinongoitika zvega. Icho chikamu chekutenderera uye hachiwedzere nekuda kwekuita kwevanhu. Pakati pezvinobuda izvi tinowana magasi akabudiswa panguva yekuputika kwegomo, asi migumisiro yaro yakanga isiri yekusingaperi. Nekudaro, nekuuya kweHuman Industrial Revolution uye kuwedzera huwandu hwevanhu, takatarisana nemamiriro epasi rose ekusvibiswa kwemhepo.
Chero kusvibiswa kwemhepo kunoreva kuvepo kwezvinhu zvine chepfu zvinogadzirwa nemabasa evanhu.
Sezvatinoziva tese, mhedzisiro yekusvibiswa kwemhepo yakawanda kwazvo. Yekutanga uye yekukurumidza ndeyekuwedzera uye kuipa kwezvirwere zvekufema uye zvemoyo pakati pevanhu vanogara munzvimbo dzakasvibiswa dzemaguta. Vamwe, pedyo nenzvimbo dzemaindasitiri, vanobudisira zvinhu izvi zvine chepfu mumhepo. Zvirwere zvekufema uye zvemoyo zvakawedzera zvakanyanya munzvimbo dzese idzi.
Inofungidzirwa izvozvo inenge 3% yezvipatara zvinokonzerwa nekuwedzera kwezvirwere zvinoenderana nehuwandu hwezvinosvibisa mumhepo. Nyika dzakasvibiswa zvakanyanya pasi rose idziya dzine huwandu hwemagasi aya nekudaro kukanganisa kukuru pahutano.
Imwe migumisiro yakakomba yekusvibiswa kwemhepo ndiyo inozivikanwa zvikuru yegreenhouse effect. Hatifanire kuvhiringa greenhouse effect pachayo nekuwedzera kwayo. Chinetso hachisi chokuti kune greenhouse effect (pasina iyo, upenyu hwaisazova sezvatinohuziva), ndechokuti iri kuwedzera migumisiro yamagasi aya. Mamwe ematambudziko anokonzerwa nekusvibiswa kwemhepo ndiko kuparadzwa kwemhoteredzo yezvipenyu, mabasa makuru, kukwira kwemakungwa, kutsakatika kwenyika, kuberekana kwezvipembenene, kutsakatika kwemarudzi., Etc.
Nyika yakasvibiswa zvakanyanya pasi rose
Tinoziva kuti gore rimwe nerimwe matani anopfuura mabhiriyoni 36 ecarbon dioxide anobudiswa mumhepo. Ndiro guru regreenhouse gasi rinokonzera shanduko yemamiriro ekunze. Nzira yekubudisa mafuta aya inonyanya kukonzerwa nekusvibisa mabasa evanhu. Zvakadaro, shomanene bedzi dzenyika dzinoshatisa zvikurusa dzepasi dzinobudisa uzhinjisa hweaya magasi. Zviri pachena kuti nyika dzakanyanya kusvibisa pasi rose mumakore achangopfuura iChina, United States, India, Russia neJapan.
Kana tichitaura nezve CO2 emissions, tinoidaidza kuti gasi rekutanga, asi inonziwo metric. Kana isu tatoziva yakaenzana CO2 emissions, isu tinogona kutoziva iyo kabhoni tsoka yedunhu rega rega, kunyangwe zvine musoro. kusvibiswa kwainobudisa hakusi zvose, uyewo CO2.
Kana isu tisingazive, isu tinofanirwa kuziva kuti mazinga aripo ekusvibisa haasati aitika mukati memakore 3 miriyoni pasina vanhu paNyika. Zvinofanira kurangarirwawo kuti panguva iyoyo Nyika yakanga ichipfuura nepakati penguva yekuputika kwakanyanya.
Maererano nedata iripo, tinoona kuti China inotora 30% yehuwandu hwekuburitswa kwepasi rose, nepo United States ichitora 14%. Ngationgororei kuti ndechipi chinzvimbo chenyika dzakasvibiswa zvakanyanya pasi rose:
China, ine anopfuura 10.065 miriyoni matani ecarbon dioxide emissions
United States, 5.416 GtCO2
India, ine 2.654 GtCO2 yehutsi
Russia, ine 1.711 miriyoni matani e CO2 emissions
Germany, 759 mamirioni matani eCO2
Iran, mazana manomwe emamiriyoni ematani e CO720
South Korea, 659 mamirioni matani eCO2
Nyika zhinji dzakasvibiswa pasi rose
Bangladesh yakapinda pachinhanho chenyika dzakasvibiswa zvakanyanya pasi rose nekuda kwekusvibiswa kwayo kwakanyanya. Hunhu hwemhepo hwayo hwakaderera zvakanyanya maererano nemazinga anotenderwa. Avhareji ye97,10 inosvibisa zvimedu yakasvikwa. Mari iyi inofanirwa muchidimbu vanhu vanopfuura mamirioni zana nemakumi matanhatu nenhanhatu vanogara muBangladesh ndivo vane chekuita nekubuda kwehutsi hwakakura. Mumakore achangopfuura umo indasitiri yeindasitiri yakura zvakanyanya. Kune mafekitari mazhinji, kunyanya mafekitori emucheka, ari kugadzira huwandu hukuru hwekuburitsa gasi regreenhouse.
Nzvimbo huru yehupfumi hweSaudi Arabia kutorwa kwemafuta. Iyi inzvimbo yakakura yekuwana mari uye yave imwe yematambudziko avo akakomba. Iko kubviswa kwemafuta izvo zvisingangobudisi zvikomborero zvehupfumi, asiwo zvinobudisa huwandu hwakawanda hwemagasi anosvibisa. kubudiswa kwemafuta efossil Izvo zvakanyanya chepfu uye zvinokuvadza kune hutano.
India yakapindawo padanho re nyika dzakanyanya kusvibisa pasi rose dzine kukura kweindasitiri kwakakwira. Haisi kukura muindasitiri chete, asi inoshandisa zvisizvo fetereza yemakemikari. Kusashandiswa zvakanaka kwefotereza uku kwasvibisa minda yese ine vhu rakaorera nematsime anochengeta mvura.
Zvinogona kutaurwa kuti China ndiyo imwe yenyika dzinotungamira muhupfumi hwenyika. Nekudaro, iri pakati penyika dzakasvibiswa zvakanyanya pasi rose. Akanga ari iye akaunza ruzivo rutsva uye mitemo yekushanda yezviyero zvekudzivirira nekudzora kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Zvakadaro, maguta makuru ane nhurikidzwa yemhepo yakasvibiswa zvokuti haugoni kuona zuva. Kubuda kwecarbon dioxide kuChina kuri kuramba kuchiwedzera zvakapetwa kaviri kune dzimwe nyika huru dzakaita seUnited States.
Paunofunga nezvenyika yakasvibiswa zvikuru munyika, zvimwe haufungi nezvenyika ino. Saka, sekune dzimwe nyika dzakadai seIndia neSaudi Arabia, kugadzirwa kwemaindasitiri makuru ekutanga kuri kuwedzera nekukurumidza. Uku kusimukira kwemaindasitiri kunotungamira kune yakawandisa greenhouse gasi kubuda. Egypt inogona kunge yakasvika mwero wekusvibiswa, inokwana zvakapetwa ka20 pane inobvumidzwa.
Brazil ndeimwe yenyika dzichiri kusimukira dzine hupfumi hwakabudirira. Zvinosuruvarisa, uku kukura kwehupfumi kunobatanidzwa nekuziva kwakaderera kwekutarisira zvakatipoteredza. Kudzikira kwekusagadzikana uku kunoreva kuti panewo zvishoma zvaitwa nehurumende. Zvose izvi zvinowedzera kuparadzwa kukuru kwemasango kwakatambudzwa nerimwe remapapu makuru epasi, Amazon. Haingowedzeri chete huwandu hwegasi rinosvibisa, asi zvakare inoderedza kutorwa kwekabhoni dhaikisaidhi nezvirimwa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvenyika dzakanyanya kusvibisa pasirese uye dzakanyanya kusvibiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Nyika zhinji dzinosvibisa pasi rose
Biofertilizer kurwisa kuora kwevhu